Lisitry ny tsihy fiara TPE nohavaozina tamin'ny martsa 2021
We Shaoxing Huawo Auto Parts Co., Ltd dia manam-pahaizana manokana amin'ny famokarana tsihy fiara. Azontsika atao ny manavao ny maodelin'ny tsihy fiara haingana araka izay tratra. Raha tsy ampidirina amin'ny lisitry ny maodely ireo maodelin'ny fiara ilainao, azafady mifandraisa anay indray mandeha, ary afaka mamita azy io haingana izahay, koa raisina an-tanana raha manana laser 3D ianao ...
Ny zava-drehetra tokony ho fantatrao momba ny gorodon'ny fiara
Rehefa mila mividy tsihy gorodona fiara isika, ahoana no hahitana ny mpanamboatra tsara indrindra? Azonao atao ny mitady ao amin'ny Google amin'ny alàlan'ny "factory mats car", avy eo afaka mahita tranokala marobe ianao, ary mila mitsara hoe iza no factory mats fiara ilainao, ary ny manamarina ireo fitaovana mats an'ny fiara no ilainao. Misy vady tsara fanahy ...
avy amin'ny admin tamin'ny 21-02-09
Fitaovana isan-karazany sy fampiasa amin'ny gorodona amin'ny arofanina miaraka amin'ny fomba fanasana samy hafa. Hafa ihany koa ny hamafin'ny fanasana, ny tsihy amin'ny fiara izao dia matetika miaraka amin'ireo fitaovana samihafa ireo: karipetra, tsihy fiara fingotra, tsihy fiara pvc ary tsihy fiara TPE / TPR. Andao hazavao hoe inona no mahasamihafa an'ilay washin ...
Ahoana ny fampiasana ny matanao amin'ny gorodona mandritra ny 20 taona?
Rehefa lasa reny ianao dia mety tena sahirana isan'andro mba hahazoana antoka fa voakarakara tsara ny tsirairay ao amin'ny fianakaviana. Tsy manam-potoana hanadiovana ny efitrano ianao, ary tsy manam-potoana hanadiovana ny fiaranao. Midika ny zava-drehetra ny fotoana, tsy afaka miandry akory ianao, mila mitady fomba hanomezana aina anao. At ho ...
Ahoana ny fomba hisafidianana ny tsihy fiaran'ny fiara?
Rehefa nividy Fiara vaovao ianao dia mila mividy tsihy fiara indray mandeha. We Huawo auto parts Co., Ltd dia manome karazan-tsambo sy vatan-kazo maro isan-karazany hiarovana ny atin'ny fiara. Hampahafantarinay izay mats tsara indrindra amin'ny gorodona ho anao. Iza amin'ireo mats gorodona fiara no mifanaraka amin'ny fiarako? Rehefa mitsidika ny izahay ...
Firy ny maodelin'ny fiara ananantsika?
Huawo Auto Parts Co., Ltd dia orinasa mpamokatra tsihy TPE namokatra bobongolo maro ho an'ny tsihy fiara sy tsihy vatan-kazo. Manana mats fiara sy lasitra mat ny fiara ho an'ny Toyota, Honda, Land Rover, BMW, Jeep, Porsche, Mercedes-Benz, Chevrolet, Cadillac, Ford, Nissan, Lexus, Audi, Das Auto, Volvo, Jaguar, KIA, Mazda, Tesla , Mitsubishi Motors, Bui ...
Maninona ny fitaovana TPE no azo ampiasaina amin'ny indostrian'ny fiara
Hatramin'ny seza sy kalesy taloha dia hatramin'ny fiara maoderina dia nihatsara ny fitaovana fandehanan'ny olona. Mba hampahazoana aina kokoa, ny famolavolana tsihy fiara TPE dia namokatra tsihy fiara TPE niseho teo imasom-bahoaka. Thermoplastic elastomer TPE dia vita amin'ny akora fototra SEBE mifangaro amin'ny menaka fotsy sy oth ...
Fitaovana tsihy fiara TPE: inona avy ireo tombony azo avy amin'ny fitaovana fametahana fiara TPE?
Ny TPE dia karazana akora vaovao misy elastika avo sy tanjaka famoretana. Araka ny fahalemen'ny famokarana sy ny fanodinana ireo fitaovana TPE dia azo hamokarana mba hanana endrika hafa. Ankehitriny, ny tsihy TPE dia efa lasa iray amin'ireo akora fototra amin'ny sehatry ny famokarana sy ...
Karazana fiara inona no ilain'ny mpankafy ny fiampitana!
amin'ny alàlan'ny admin amin'ny 20-12-15
Ny tsihy amin'ny fiara dia tena ilaina amin'ny familiana isan'andro, fa ny tany ampitan-tany koa dia miantsoroka ny fiarovana ny fiara ary miaro ny vatan'ny fiara. .Ny fotoana iray ihany, mahantra ny manovaova, unde ...
Ny tsihy fiara TPE no fironana amin'ny ho avy
Ny gorodin'ny fiara dia fantatry ny tompona rehetra, na inona na inona avy any amin'ny magazay fiara 4S ho fanomezana, na mividiana ny tenanareo, ny tsihy fiara no atiny fiara voalohany ilainao. Amin'ny maha-fanangonana fiara tsy misy rano, anti-fouling, anti-slip, fiarovana ao amin'ny iray amin'ny gorodon'ny fiara, eo amin'ny tsenan'ny fiara ...
Mikasika akaiky ny tany isan'andro, ahoana no fanadiovana ny hub Automotive?
Niainga ho fitaovana mandeha ny fiara, ka mihazakazaka eny ivelany isan'andro, misy karazany maro ny tontolo iainana, misy fotaka na vovoka be ny toerana sasany, maloto be, ka maloto be ny haben'ny fiara, tsy zakanay izany, avy eo ahoana ny fanadiovana ny hub automotive? Avelao ny Shaoxing Huawo Auto Parts Co ....
Ahoana ny fisafidianana ny hatevin'ny matin'ny gorodona fiara?
Ankehitriny saika ny fianakaviana rehetra dia manana fiara, ary ny tompona fiara rehetra dia tia ny fiarany. Mba hitandroana ny fahadiovan'ny fiara dia hividy karazana kojakojam-piarakodia izy ireo, ilaina ny matotra amin'ny tongotra, fa ny hatevin'ny lamban'ny fiara kosa samy hafa, ka ny hateviny no mety? Ny tsihy tongotra amin'ny fiara dia miovaova amin'ny ...
Ny lisitra maodelin'ny tsihy fiara TPE nohavaozina tamin'ny volana martsa ...